Askar AMISOM ka tirsan oo shacab Soomaali ah laayey oo dil toogasho lagu xukumay | Xaysimo
Home War Askar AMISOM ka tirsan oo shacab Soomaali ah laayey oo dil toogasho...
Askar AMISOM ka tirsan oo shacab Soomaali ah laayey oo dil toogasho lagu xukumay
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay maxkamadeynta 5-tii bishan ka bilaabatay Maxkamadda AMISOM ee Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho.
Labadii nin ee xabadda ku furtayna waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xabsi ah”, ayuu yiri
Ciidamada AMISOM oo aanu la xiriirnay ayaan weli xaqiijinin arrintan, balse waxay horey u ballan qaadeen in tallaabo adag laga qaadayo ciidanka haddii dembiga lagu caddeeyo.
Raiisul wasaaruhu waxa uu hadalkaasi sheegay kaddib markii uu kulan la qaatay safiirka waddanka Uganda u fadhiya magaalada Muqdisho iyo taliyaha qeybta ee howlgalka ciidammada nabad ilaalinta ee AMISOM, kuwaas oo ay ka wadahadleen, sidii xal looga gaari lahaa dadkii ay AMISOM dhawaan ku dhileen degmada Golweyn, gobolka Shabeellaha Hoose.
Hawlgalka nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo AMISOM ayaa horey u sheegay in baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen lagu ogaaday in toddobo qof ay ciidamadooda ku dileen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ahaayeen dad rayid ah oo aysan ahayn xubno ka tirsan Al-Shabaab, sidii AMISOM ay horey u shaacisay.
War-saxaafadeed ay AMISOM soo saartay dhammaadkii bishii siddeedaad ee sannadkan ayaa lagu sheegay in dhacdadaasi la baarayo isla markaana askartii geysatay dilka lala xisaabtami doono.https://www.bbc.com/ws/av-embeds/cps/somali/war-59244803/p09rvfdx/soQoraalka Codka,
AMISOM “dadkii inta indhaha ka xireen oo miino ku fariisiyeen ayey ku qarxiyeen”
Ka dib markii dhacdadaas ay dhacday waxay hoggaanka AMISOM la kulmeen cuqaal, xubno ka tirsan bulshada iyo mas’uuliyiinta dowladda, kuwaa oo sida ay sheegaty ay u caddeeyeen in aan marnaba la aqbali karin falal dambiyeedyada ay ciidamadu u geystaan dadka rayidka ah.
Baaritaankaasi waxaa sida ku cad war-saxaafadeedka AMISOM horkacaya sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada AMISOM iyo laba xubnood oo kale oo ka tirsan guddiga Midowga Afrika ee fadhigiisa yahay magaalada Addis Ababa.
Qoraal horey uga soo baxay AMISOM waxaa lagu sheegay in dowladda Uganda ay madaxda hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, u xaqiijisay in maxkamad milatari gudaha Soomaaliya lagu saari doono askarta ay ku caddaato in ay dilkaasi geysteen.
11-kii bishii August, waxay AMISOM sheegtay “in ay soo gaareen warar sheegaya in Golweyn ay ku dhinteen dad rayid ah kaddib markii ciidamo ka socday AMISON lagu weeraray inta u dhaxeysa Beled-Aamiin iyo Golweyn.”
10-kii isla bishaas ayay ahayd markii kolonyo ciidamada Uganda ah oo marayay inta u dhaxaysa Danow iyo Golweyn ay waddada u galeen dabley ka tirsan Al-Shabaab, halkaasina uu dagaal culus ka dhacay.
Dagaalka Kaddib ayaa sida la sheegay ciidamada Uganda waxa ay shan qof oo rayid ah kala baxeen beer ku taalla meel u dhow halka uu dagaalku ka dhacay, iyagoo sidoo kalena laba darawal kala dagay gawaaridii ay wateen.
Gudoomiyaha Deegaanka Shalambood, Nuur Cusmaan Raage oo isla maaalintaasi BBC-da la hadlay ayaa ciidamada AMISOM ku eedeeyay in dadkaasi rayidka ah ay laayeen.
“Inta indhaha ka xireen ayay ku fariisiyeen miino, ka dibna way ku qarxiyeen”, ayuu yiri guddoomiye Nuur.
“Iyadoo xabbado la isku ridaayo haddii dadka ay dhintaan, qofba meel ayuu ku dhimanayaa. Dadkan waa dad la soo uruuriyay oo gacmaha iyo indhaha laga xiray, kaddibna la laayay waayo”, ayuu yiri.
AMISOM ayaa isla maalintaasi barteeda Twitter-ka soo dhigtay qoraal ku saabsan dagaalkaasi, waxa ayna sheegtay: “Intii is-difaaciddu ay socotay, toddobo argagixiso ah ayaa lagu dilay, kuwa kalena waa lagu dhaawacay, hubna waa la soo qabtay.”
“AMISOM waxay bogaadineysaa geesinnimada iyo howlgalka deg degga ah ee askarteeda oo mid ka mid ah uu ku dhaawacmay”, ayaa lagu yiri qoraalkaasi AMISOM.